Turkiga oo Dhexdhexaadinaya Dawladda iyo Puntland. - Wargeyska Faafiye
Turkiga oo Dhexdhexaadinaya Dawladda iyo Puntland.
Siyaasi sare oo ka socda dawladda Turkiga ayaa shalay tagay Soomaaliya, iyadoo wararka aanu ka helayno ilo xogogaal ah oo sare ay sheegayaan in siyaasigaasi uu dhexdhaxaadin ka galayo khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland eek u saabsan qaabka doorashada sannadkan.
Kani Torun waa safiirkii hore ee Turkiga ee Soomaaliya oo ay isku dhow yihiin madaxweynaha waddankaasi Recep Erdogan, xilligana waxa uu Guddoomiye Ku xigeenka Guddiga Arirmaha Dibedda ee Baarlamaanka Turkiga.
Shalay ayuu kasoo dagay Muqdishu isagoo uga gudbay Puntland oo xalay ku hoyday.
Wararka aani ka helany ilaha lagu kalsoon yahay ayaa sheegayaa in natiijada kulamada uu la yeesho madaxda Puntland ula tegi doono Hoggaamiyayaasha dawladda Federaalka.
Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa sheegaya in labada dhianc ay rajo ka qabaan in dadaalkan dawladda Turkiga uu miro dhalo.
Warbixino ku saabsan booqashada wafdigaas iyo faahfaahinta toogashadii shalay ka dhacday Muqdishu hoos ka dhagayso.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsWhat African presidents are paid, why it matters.Meles Zenawi oo sheegay in uu Somaaliya ka baxeeyn ilaa la helo ciidan badala kuwiisaSarkaal DF ah oo Itoobiyaanka ay xireen .Shariif Xasan: Dib u dhaca dastuurkaMarwada madaxweynaha France oo cisbitaal la dhigay kadib markey maseertay.